Wararka - Runjin wuxuu yeeshay kulan dhab ah oo ku saabsan sida loogu sii adkeyn karo xilligan cudurka dilaaga ah.
Runjin waxay yeelatay kulan dhab ah oo kusaabsan sida loogu sii adkeyn karo hada cudurka dilaaga ah.
Shiinaha gudahiisa, magaalooyin badan iyo ka badanba waxay bilaabeen inay ku noqdaan nolol caadi ah, waxayna ku noqdeen shaqadii xafiiska sidii caadiga ahayd. Rakibaadda goobta iyo guddiga wax saameyn ah kuma yeelan doono.
Mashruuca socda ee dibedda, waxaan ku bilaabi doonnaa kontoroolka fog fog ama tilmaamaha guddiga goobta. waxaan qaadi laheyn talaabooyin khadka tooska ah ah si aan u xallino arrimaha waqti kasta si aan u taageerno macaamiisha.
Dhanka kale, kooxdayada xallinta waxay qaadan doonaan waqti dheeri ah waxayna sameeyaan dadaal dheeri ah si ay u horumariyaan tikniyoolajiyadda mashiinka jalaatada .Waxaan nafteena ka dhigi lahayn mid tartan badan, ka dhigno wax soo saarkeena wax ku ool badan
Aaminaad marka viruska corona la waayo, wax walbana si caadi ah ayey u socdaan .Shirkadeena, kooxdeena ayaa qancin karta macaamiisha wax badan, una keeni kara macaamiil qiimo badan